Umcimbi Oqeda Isasasa weSinocare iPOCT Industrial Park Project-News-Sinocare
Isikhathi: 2021-02-22 Hits: 179
NgoJanuwari 2021, umcimbi wokubekwa phansi kwesisekelo senqwaba yephrojekthi yeSinocare iPOCT Industrial Park wabanjelwa endaweni yephrojekthi. Le phrojekthi yipaki lezimboni elikhethekile le-iPOCT elakhiwe yiSinocare ngotshalomali lwe-RMB 1 billion. Kuhlelwe ukuthi ihlukaniswe ngamamojula amathathu, okungukuthi i-iCARE base base, isizinda sokukhiqiza i-AGEscan nesisekelo sokukhiqiza seCGM. Ngemuva kokuphothulwa kwephrojekthi, izobona ukukhiqizwa okukhulu kwe-iCARE ne-iCGMS, imikhiqizo emisha eyenziwe yiSinocare emhlabeni wonke, futhi inikeze izixazululo ezibanzi zokuvikela nokwelashwa kwezifo ezingamahlalakhona.
Kusukela ngo-2016, iSinocare yethule ukwakheka kwebhizinisi lomhlaba wonke, yabamba iqhaza ekutholakaleni iTrividia Health Inc ne-PTS e-United States, futhi yakhulisa ngenkuthalo ibhizinisi lokuhlola i-POCT njenge-lipids yegazi ne-hemoglobin eglycosylated. Futhi ngokuqanjwa kokubambisana kocwaningo nentuthuko ekhaya nakwamanye amazwe, kanye nokuhlanganiswa kwamanethiwekhi wokumaketha womhlaba wonke, sekungene ekamu elihola phambili lezinkampani zamamitha eglucose egazini lomhlaba.
Iphrojekthi esanda kuqalwa yeSinocare iPOCT Industrial Park izokwakhiwa ngezigaba ezintathu, okuyisikhathi esilinganisiwe seminyaka emihlanu yokwakha. Ngemuva kokuphothulwa, kulinganiselwa ukuthi inani lokukhishwa lonyaka lizofinyelela ezigidigidini ezi-3, umnikelo wentela uzokhuphuka ngaphezu kwezigidi ezingama-200, futhi kucishe kudaleke imisebenzi engaba ngu-2,000 XNUMX. Ngenkathi isiza ukukhulisa amandla aphelele weSinocare, ibuye ifake umfutho ekukhuleni kochungechunge lwe-biomedicine kanye nemboni yezempilo eChangsha High-tech Zone.
Ikhasi Langaphambili: Ilebhu Yokumiswa Kwe-iPOCT
Ikhasi elilandelayo: UKUSETSHENZISWA OKUHLOSIWE KWE-Virus IgM-IgG ANTIBODY TEST